Semalt विशेषज्ञ Google विश्लेषकमा आत्म-रेफरल्स कसरी ठीक गर्ने भनेर इलस्ट्रेट्स
इगोर Gamanenko, को ग्राहक सफलता प्रबन्धक Semalt , यहाँ कसरी Google विश्लेषण आत्म-सिफारिश प्रबन्ध गर्ने एक व्यापक पुस्तिका प्रदान गर्दछ।
हाम्रो कम्पनीमा, हामी गुगल एनालिटिक्सको साथ ठूलो व्यापार काम गर्दछौं। नियमको रूपमा, जब हामी ग्राहकहरूको लागि एनालिटिक्स समीक्षा गर्छौं, हामी सामान्य आधारभूत आत्म-रेफरल मुद्दाहरूको खोजी गर्दछौं।
त्यस्तै, हामी आफैंको सिफारिशहरू मिलाउने सम्बन्धमा ढिलोसम्म सम्पर्कहरूको एक टन प्राप्त गर्दै छौं। सामान्यतया, हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न उत्तम तरिकामा ब्लग प्रविष्टि रचना गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंलाई थप आपत्ति छैन यदि हामीलाई यो पोष्टले तपाईंलाई तपाईंको सरोकारको सामना गर्न मद्दत पुर्‍यायो भने पनि हामीलाई भर्न दिनुहोस्।
गुगल एनालिटिक्समा सेल्फ रेफरलले के बुझाउँदछ?
गुगल एनालिटिक्समा आत्म-रेफरलहरू हुन् जहाँ तपाईं अवलोकन गर्नुहुन्छ तपाईंको ठाउँ रेफरल रिपोर्टहरूमा देखा पर्दछ। अधिकांश भागका लागि यो ठाउँ हो जहाँ तपाईं निम्न कोड हराउनुहुन्छ वा व्यवस्था मुद्दा छ जुन एक पाहुनालाई विभिन्न सत्रहरू ट्रिगर बनाउँदछ जब त्यहाँ केवल एक मात्र हुनुपर्छ।
असाधारण मामिलाहरूमा, सेल्फ रेफरलले एक पल सत्र शुरू गर्न आवश्यक पर्दैन एक स्वयं-रेफरलको परिणामस्वरूप।
अफ मौकामा तपाईले Google एनालिटिक्स विभिन्न सत्र र विभिन्न उप-डोमेनहरू माथि क्रसवाइज सत्र ट्रेस गर्न डिजाइन गर्नुभएको हो, अलि अलि सेल्फ रेफरल सामान्य छ।
जहाँसम्म तपाईं आफ्नो लेखन-अपमा धेरै स्वयं-रेफरलहरू देख्नुहुन्छ, यो समस्यालाग्दो छ त्यहाँ समस्या छ।
तपाईलाई रेफर रेफरलहरू कन्फिगर गर्नु किन उचित हुन्छ?
गुगल एनालिटिक्समा आत्म-रेफरल्सले आचरण, व्यवहार, र जानकारी परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो मौलिक रूपमा तपाईंको जानकारीको ठूलो अंश हो! हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
सेल्फ रेफरलले जानकारी अधिग्रहणलाई प्रभाव पार्छ किनकि यसले भ्रामक रूपमा दृष्टिकोण सत्रहरू विस्तार गर्दछ, धेरै जसो रेफरलहरूको लागि। यस्तो अवस्थामा जब एक क्षण सत्र सुरू भएको छैन, र एक आत्म-रेफरल अझै पनि हुन्छ, प्रत्यक्ष र सीपीसी जस्ता च्यानलबाट उत्पन्न एक आन्दोलनलाई वास्तवमै रेफरलबाट उत्पन्न ट्राफिकको रूपमा नोट गर्न सकिन्छ।
गुगल एनालिटिक्समा आत्म-सन्दर्भका दुई मौलिक ड्राइभरहरू
आत्म-सन्दर्भको दुई मौलिक प्रकारको उत्पत्ति यसबाट हुन्छ:
क्रस स्पेस ट्रेसि ofको बेस सेटअप बन्द
एउटा प्लेटफर्ममा निम्न कोडहरू छुटेका छन्
यदि तपाईं प्लेटफर्ममा निम्न कोडहरू हराउँदै हुनुहुन्छ भने, यसले सत्रको अन्त्य बनाउँदछ र अर्को सत्र ग्राहकले तपाईंको वेबसाइटमा निम्न पृष्ठमा स्नैप गर्दछ जुन ट्र्याकिंग कोड समावेश गर्दछ।
अद्यावधिक गर्नुहोस्: अतिरिक्त मुद्दाहरू जुन स्वयं-सिफारिशहरूमा परिणामहरू हुन्
तपाईंको स्व-रेफरल समस्याहरूको ठूलो संख्या सेट गर्न पछि, हामीले त्यस्तै आत्म-सन्दर्भका लागि दुई भिन्न कारणहरू हाइलाइट गरेका छौं:
भित्री कनेक्शनमा UTM लेबलको न्यून उपयोग
हेडर जानकारीको नियन्त्रण
यदि तपाईं UTM कारकको साथ जडान भित्र लेबलिंग गर्दै हुनुहुन्छ, कृपया रोक्नुहोस्। बरु, तपाईंको भित्री लडाईहरू पत्ता लगाउन अनुकूलन मापन र च्यानलहरूको उपयोग गर्न मद्दतको लागि हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। यो अधिक प्रवीण छ र ओभरराइट गर्दैन जहाँ आन्दोलन पहिलो बाट उत्पन्न हुन्छ।
अफ मौकामा जुन तपाईंले सबै ज्ञात चिन्ताहरूलाई हेर्नुभयो, र नियन्त्रण हेडर जानकारीलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, अधिक डाटाको लागि हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्।
प्रस्तुतीकरण पृष्ठ रिपोर्टमा सेल्फ रेफरलहरू अलग गर्दै
तपाईको आत्म-सन्दर्भको कारण के हो भन्ने कुरालाई तीन चरणमा सम्भव बनाउनु पर्छ। तेस्रो चरणमा, हामीले तपाईंलाई गुगल विश्लेषक प्लेटफर्ममा परिचय गराउनका लागि प्रोप्लेड फ्रगमेन्ट विन्यास गर्‍यौं जुन तपाईंलाई परीक्षाको लागि आवश्यक हुनेछ। तीन चरणहरू निम्न अनुसार छन्:
प्रस्तुतीकरण पृष्ठ रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
"पूर्ण रेफरर" को सहायक प्यारामिटर कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
उन्नत क्षेत्र कार्यान्वयन गर्नुहोस्।